Mpanamboatra sy mpamatsy Magnet grade 35 | paravodilanitra
Andriamby SmCo kilasy faha-35 na andriamby samarium Cobalt kilasy faha-35 no andriamby Samarium Cobalt matanjaka indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Izy io dia fitaovana SmCo avo lenta manokana manome vokatra angovo avo lenta, fanoherana ny harafesina, fitoniana tsara amin'ny hafanana ary fanoherana ny demagnetization mari-pana.
Taloha, ny grade 30 na 32 no avo indrindra na Samarium Cobalt naoty izay azon'ny mpamatsy andriamby China SmCo rehetra natolotra. Samarium Cobalt kilasy 35 dia anjakan'ny orinasa amerikana sasany, toa an'i Arnold (Arnold Magnetic Technologies, grade RECOMA 35E), EEC (Electron Energy Corporation, 34 grade SmCo). Horizon Magnetics dia iray amin'ireo orinasa andriamby vitsivitsy izay afaka mamatsy andriamby SmCo kilasy 35 amin'ny habetsaky ny br> 11.7 kGs, (BH) max> 33 MGOe ary Hcb> 10.8 kOe.
1. Hery bebe kokoa fa ambany lanja. Ho an'ny Samarium Cobalt, ity kilasy ity dia mampitombo ny hakitroky ny angovo mba hifanaraka amin'ireo fampiharana manakiana izay laharam-pahamehana ny habe sy ny fanatsarana ny fahombiazana.
2. Milamina ambony. Ho an'ity kilasy ity, ny BHmax, Hc ary Br dia avo kokoa noho ny grama Sm2Co17 avo lenta teo aloha toa ny kilasy 32, ary ny mari-pahaizana maripana sy ny mari-pana miasa betsaka dia nihatsara kokoa.
1. Motorsports: Ao amin'ny motorports, ity no tanjona lehibe indrindra handresena ny fifaninanana mahery vaika amin'ny alàlan'ny fanararaotana ireo fitaovana manavao mba hampitomboana ny tselika sy ny hafainganana miaraka amin'ny fonosana kely indrindra sy maharitra indrindra.
2. Manolo ny andriamby Neodymium avo lenta: Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, lafo kokoa ny vidin'ny Samarium Cobalt noho ny andriamby Neodymium, noho izany ny mazotoa Samarium Cobalt dia ampiasaina indrindra amin'ny tsena izay tsy ahafahan'ny Neodymium andriamby mahafeno ny fepetra ilaina. Ny tany tsy fahita firy Dy (Dysprosium) sy Tb (Terbium) dia manana tahiry kely any amin'ny firenena voafetra saingy ilaina amin'ny andriamby Neodymium avo lenta ao anatin'izany ny grade AH, EH na UH aza, izay ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny motera elektrika maro. 2011 dia nanatri-maso ny fiakaran'ny vidin'ny tany tsy fahita firy. Rehefa miakatra ny vidin'ny tany tsy fahita firy, ny Samarium Cobalt 35 isa, na ny naoty 30 aza dia mety ho fitaovana fampiasa andriamby tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa andriamby hijanona ho vidiny mirindra kokoa raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Noho ny fiorenan'ny maripana tsara dia lasa lasa tsara kokoa ny BHmax ho an'ny samarium Cobalt faha-35 noho ny N42EH na ny N38AH an'ny andriamby Neodymium amin'ny mari-pana mihoatra ny 150C degre.
Fampitahana ny SmCo sy NdFeB amin'ny mari-pana
Teo aloha: Andriamby SmCo5
Manaraka: Famerenanana andriamby teo aloha
Andriamby Disc SmCo
Andriamby Segment SmCo